Inkonzo ye-ODM kunye ne-OEM | Yongeza
Ukucwangciswa kwemveliso → Uvavanyo lwesampulu → Imveliso → Ukujonga umgangatho → Ukuhanjiswa
Siyakwazi ukubonelela ngamawakawaka kuzo zonke izixhobo zefanitshala ezinokuhlangabezana nemeko yeofisi, iindawo zokuzonwabisa, ezezindlu kunye nabanye. Kukho uluhlu olwahlukileyo ngomgangatho kunye nexabiso lemveliso enye yentengiso kwimakethi nganye. Ukwahluka kwemveliso kunokwanelisa iimfuno zakho.
Sibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumanqaku ohlukeneyo exabiso eliza kwenza ukuba kube lula kuwe ukulungiselela iimfuno zoluhlu olubanzi nabathengi abakhoyo.
Sibonelela ngeesampulu zasimahla ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile zokuhlola umgangatho weemveliso zethu. Kubalulekile ukuba sifumane into oyifunayo ngokuchanekileyo.
Iqela lethu elinamava, iqela lethu liya kukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo yabathengi yonke imihla. Nanini na xa ufuna inkxaso yemveliso, iisampulu, amaxesha emveliso ngokukhawuleza, ukuthunyelwa kwemveliso eyongezelelweyo ... Sihlala silapha kuwe.
Sinabasasazi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye banandipha igama eliphezulu e-US, eYurophu naseAsia. Okwangoku sinenethiwekhi yokuhambisa kumazwe angaphezu kwama-20, iYurophu neAsia. Nceda usazise ukuba sinokukwenza ntoni. Wamkelekile ukuba ngumsasazi wethu omtsha kwimakethi yakho, ujonge phambili kwintsebenziswano ende emide!
Sinikezela sikhululekile kwaye sigqwesile emva kwenkonzo yokuba zonke iimpahla zithengisiwe, ukuba kukho ukuzisola kuthi, siza kuyicombulula ingxaki okokuqala emva kokuba unike ubungqina bolwazi kwangaphambili.